Rina Randriamasinoro: Vavaka no nanakatonany ny fampielezan-kevitra
lundi, 25 novembre 2019 23:27
Hifarana anio misasak’alina ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina hatao ny tontolo andron’ny alarobia 27 novambra 2019 izao. Ho an’ny kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, mitondra ny laharana faha 2 eo amin'ny bileta tokana, dia vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano no nanakatonany ny fampielezan-keviny androany tolakandro.
Notetezin’ity kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara ity avokoa ireo Fokontany 192 eto Antananarivo Renivohitra, nihaonany sy nifampiresahany nivantana tamin’ny vahoaka. Tonga maro nameno kianja Ambohijatovo ireto farany ny sabotsy teo, nandritra ny faradoboka.
Mazava ny lalan’i Rina ho Ben’ny tanàna, hoy ny teny miverimberina heno teny Ambohijatovo sy tamin’ireo toerana nolalovan’ny diabe sy tanjozotran’ny fiara niazo ity toerana ity.
Manentana ny olona ho « tonga maro hifidy an’i Rina laharana faha-2 sy ny mpanolotsaina laharana faha-4» amin’ny alarobia 27 novambra izao ireo nandray fitenenana, ary « aoka isika ho mailo amin'ny hala-bato ». « Miantoka ny hoavintsika mponina eto ity fifidianana ity satria isika eto Antananarivo no tarafin'ireo vahoaka Malagasy rehetra manerana ny Nosy ».